वास्तुकला - डिजाइन पत्रिका
विश्वव्यापी डिजाइनरहरूबाट राम्रो डिजाइनहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
राम्रो डिजाइन अन्वेषण गर्नुहोस्
ग्लोबल ब्रान्डबाट नवीन उत्पादनहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
नवीन उत्पादनहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
विश्वव्यापी आर्किटेक्टहरूबाट सबैभन्दा ठूलो वास्तु परियोजनाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
उत्कृष्ट वास्तुकलाको अन्वेषण गर्नुहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय फेशन डिजाइनरहरूबाट रचनात्मक फेसन डिजाइनहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
रचनात्मक फेसन डिजाइन अन्वेषण गर्नुहोस्
विश्वव्यापी ग्राफिक्स डिजाइनरहरूबाट सबैभन्दा ठूलो ग्राफिक डिजाइनहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
महान ग्राफिक डिजाइन अन्वेषण गर्नुहोस्
विश्वव्यापी डिजाइन एजेन्सीहरूबाट सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक डिजाइनहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक डिजाइन अन्वेषण गर्नुहोस्
शनिबार २३ जनवरी २०२१
क्याफे आधुनिक, स्वच्छ सौन्दर्यको लागि एक संक्षिप्त प्रतिक्रियामा, अमूर्त फारममा प्रयोग गरिएको काठको फलफूल द्वारा प्रेरित एक आन्तरिक सिर्जना गरिएको थियो। क्रेटहरूले खाली ठाउँहरू भर्दछ, एक इमर्सिभ, लगभग गुफा जस्तो मूर्तिकला फारम सिर्जना गर्दछ, अझै एउटा जुन सरल र सीधा ज्यामितीय आकारबाट उत्पादन हुन्छ। परिणाम एक स्वच्छ र नियन्त्रित स्थानिक अनुभव हो। चतुर डिजाइनले पनि सीमित स्थानलाई व्यावहारिक फिक्स्चरलाई सजावटी सुविधाहरूमा बदल्दै अधिकतम गर्दछ। बत्तीहरू, कपाट र शेल्फले डिजाइन अवधारणा र मूर्तिकला दृश्यमा योगदान गर्दछ।
पढ्न जारी राख्नुहोस्
शुक्रबार २२ जनवरी २०२१
सेवा कार्यालय परियोजनाको अवधारणा भनेको "कार्यालयलाई शहरसँग जोड्नु" वातावरणको फाइदा लिदै। साइट ठाउँमा अवस्थित छ जहाँ शहर अवलोकन गर्दछ। यसलाई प्राप्त गर्न सुरुnel आकारको स्पेस अपनाईन्छ जुन प्रवेश द्वारबाट कार्यालय स्पेसको अन्त्यसम्म जान्छ। छतको काठको रेखा र कालो खाली ठाउँ जुन स्थापित लाइटहरू र वातानुकूलित फिक्स्चरहरू शहरको दिशामा जोड दिन्छ।
असबाबवाला ध्वनिक प्यानल
University of Melbourne - Arts West
बिहीबार २१ जनवरी २०२१
असबाबवाला ध्वनिक प्यानल हाम्रो संक्षिप्त फैब्रिक लपेटेको ध्वनिक प्यानल को एक धेरै को आपूर्ति र विभिन्न आकार, कोण र आकार को साथ स्थापित गर्न को लागी थियो। प्रारम्भिक प्रोटोटाइपले यी डिजाइनहरू र भित्ता, छत र सीढ़ीको भित्ताबाट यी प्यानलहरू स्थापना र निलम्बन गर्ने भौतिक माध्यमहरू दुवैमा परिवर्तन देख्यो। यस बिन्दुमा हामीले यो महसुस गर्यौं कि अहिलेको छत प्यानलका लागि स्वामित्वमा झुण्ड्याउने प्रणालीहरू हाम्रा आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त थिएनन् र हामीले आफ्नै डिजाइन पनि गरेका छौं।
बुधबार २० जनवरी २०२१
रेस्टुरेन्ट आज यहाँ चीनमा बजारमा यी मिश्रित समकालीन डिजाइनहरू धेरै छन्, प्राय: पारम्परिक डिजाइनहरूमा आधारित तर आधुनिक सामग्री वा नयाँ अभिव्यक्तिको साथ। युयुयु एक चिनियाँ रेस्टुरेन्ट हो, डिजाइनरले ओरिएंटल डिजाइन अभिव्यक्त गर्न नयाँ तरिका सिर्जना गरे, नयाँ स्थापना र लाइनहरू र डटाहरू मिलेर बनेको छ, ती रेस्टुरेन्टको ढोकाबाट रेष्टुरेन्ट भित्र विस्तारित छन्। समयको परिवर्तनसँगै, व्यक्तिको सौन्दर्य प्रशंसा पनि परिवर्तन हुँदैछ। समकालीन ओरिएन्टल डिजाइनका लागि, नवीनता एकदम आवश्यक छ।
मङ्गलबार १९ जनवरी २०२१
रेस्टुरेन्ट सौंदर्यशास्त्रको क्रमिक परिपक्वता र मानवको सौन्दर्य परिवर्तनको साथ, आफैं र व्यक्तित्वलाई हाइलाइट गर्ने आधुनिक शैली डिजाइनको महत्त्वपूर्ण तत्व भएको छ। यो केस रेस्टुरेन्ट हो, डिजाइनर उपभोक्ताहरूको लागि युवा स्थान अनुभव सिर्जना गर्न चाहन्छ। हल्का निलो, खैरो र हरियो बोटबिरुवाहरूले ठाउँका लागि राँउचरल आराम र आकस्मिकता सिर्जना गर्छन्। हातले बुनेको रत्न र धातुले बनेको झूमरले मानव र प्रकृति बीचको टक्कर वर्णन गर्दछ, सम्पूर्ण रेस्टुरेन्टको सामर्थ्य देखाउँदै।
सोमबार १८ जनवरी २०२१
स्टोर मेन्स कपडा स्टोरहरूले प्राय: तटस्थ भित्री प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछन जसले आगन्तुकहरूको मुडलाई नकरात्मक रूपमा असर गर्दछ र त्यसैले बिक्रीको प्रतिशत कम गर्दछ। व्यक्तिलाई केवल स्टोरमा जानको लागि आकर्षित गर्न, तर त्यहाँ प्रस्तुत उत्पादनहरू किन्नको लागि पनि अन्तरिक्षले उत्प्रेरणा र राम्रो उल्लास पाउनुपर्दछ। त्यसकारण यस पसलको डिजाईनले सिलाई शिल्प शिल्पबाट प्रेरित र विशेष विवरणहरू प्रयोग गर्दछ जसले ध्यान आकर्षित गर्दछ र राम्रो मुड फैलाउँछ। खुला क्षेत्र लेआउट जुन दुई जोनमा विभाजित गरियो किनमेलको समयमा ग्राहकहरूको स्वतन्त्रताको लागि पनि डिजाइन गरिएको छ।
हामी मौलिक र रचनात्मक डिजाइनहरू, कला, वास्तुकला, फेसन, ग्राफिक्स डिजाइन, नवीनता र डिजाइन रणनीति मनपराउँदछौं। हरेक दिन, हामी प्रतिभाशाली डिजाइनरहरू, रचनात्मक कलाकारहरू, नवीन आर्किटेक्टहरू र उत्कृष्ट ब्रान्डहरूद्वारा राम्रो डिजाइनहरू चयन र प्रकाशित गर्दछौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको राम्रो डिजाइनका लागि विश्वव्यापी सराहना र जागरूकता सिर्जना गर्नु हो।
सदस्यता लिनुहोस् र अनुसरण गर्नुहोस्
Only Right Here चक्कु होल्डर आइतबार २८ फेब्रुअरी
180º North East उपन्यास शनिबार २७ फेब्रुअरी
Ballo पोर्टेबल स्पिकर शुक्रबार २६ फेब्रुअरी
तपाइँको डिजाइन प्रकाशित गर्नुहोस्
के तपाईं डिजाइनर, कलाकार, आर्किटेक्ट, नवप्रवर्तक वा ब्रान्ड प्रबन्धक हुनुहुन्छ? तपाईंसँग सेयर गर्नको लागि केहि राम्रा डिजाइनहरू छन्? हामी डिजाइनकर्ताहरू, कलाकारहरू, आर्किटेक्टहरू, आविष्कारकहरू र विश्वव्यापी ब्रान्डहरूबाट मूल र रचनात्मक डिजाइनहरू प्रकाशन गर्नमा धेरै रुचि राख्छौं। आज तपाइँको डिजाइन प्रकाशित गर्नुहोस्।
तपाइँको डिजाइन प्रचार गर्नुहोस्
फेब्रुअरी २०२१ (84)
जनवरी २०२१ (93)
डिसेम्बर २०२१ (93)
नोभेम्बर २०२० (90)
दिन को डिजाइन साक्षात्कार आइतबार २८ फेब्रुअरी
दिनको लिजेन्ड लिजेन्ड शनिबार २७ फेब्रुअरी
दिन को डिजाइन शुक्रबार २६ फेब्रुअरी
दिन को डिजाइनर बिहीबार २५ फेब्रुअरी
दिन को डिजाइन टीम बुधबार २४ फेब्रुअरी
क्याफे सेवा कार्यालय असबाबवाला ध्वनिक प्यानल रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट स्टोर
2021 डिजाइन पत्रिका.